I-Belmont Report ibonisa ukuba umgaqo wokuhlonipha abantu unamalungu amabini ahlukeneyo: (1) abantu kufuneka baphathwe njengonogunyazi kwaye (2) abantu abanegunya lokunciphisa elincinci kufuneka banelungelo lokukhuselwa okongezelelweyo. Ukuzimela ngokufanayo kuhambelana nokuvumela abantu ukuba baphathe ubomi babo. Ngamanye amagama, ukuhlonipha abantu kubonisa ukuba abaphandi akufanele benze izinto kubantu ngaphandle kwemvume yabo. Ngokuchanekileyo, oku kubamba nokuba umphandi ucinga ukuba into eyenzekayo ayiyingozi, okanye iyanceda. Ukuhlonipha abantu kubangela ukuba abathathi-nxaxheba-abaphandi-bafumane isigqibo.
Ngokwenza oko, umgaqo wokuHlonipha abantu uguqulelwe ukuba uthetha ukuba abaphandi kufuneka, ukuba kunokwenzeka, bafumane imvume enolwazi kubathathi-nxaxheba. Iingcamango ezisisiseko ngemvume enolwazi kukuba abathathi-nxaxheba kufuneka banikezwe ngolwazi olufanelekileyo kwifom ecacileyo kwaye kufuneka bazivume ngokuzithandela ukuthatha inxaxheba. Ngayinye yale miqathango ibe yinto eqhutywe ngayo ingxoxo eyongezelelweyo kunye ne-scholarship (Manson and O'Neill 2007) , kwaye ndiya kunika isigaba 6.6.1 kwimvume enolwazi.
Ukusebenzisa umgaqo wokuhlonipha abantu kule mizekelo emithathu ukususela kwesahluko kwimiba echaphazelekayo nganye. Kwimeko nganye, abaphandi benza izinto kubathathi-nxaxheba-basebenzise idatha yabo (iinqonkqo, iimbophe, okanye ixesha), basebenzisa ikhompyutheni yabo ukwenza umsebenzi wokulinganisa (Encore), okanye babhalisa kwisilingo (Ukuxhatshazwa ngokomzwelo) -ngaphandle kwemvume okanye ukuqonda . Ukuphulwa komgaqo wokuhlonipha abantu akuzenzeki ngokuzenzekelayo ezi zifundo ezingenakulungiswa; Ukuhlonipha abantu ngumnye wemigaqo emine. Kodwa ukucinga malunga neNtlonipho yabantu kuphakamisa iindlela ezithile eziza kuphuculwa ngazo izifundo. Ngokomzekelo, abaphandi banokufumana ifomu ethile yemvume kubathathi-qela ngaphambi kokuba kuqhutywe isifundo okanye emva kokuba kuphelile; Ndiza kubuya kule nketho xa ndixoxa ngemvume enolwazi kwicandelo 6.6.1.